के तपाईसँग यी कम्पनीका सेयर छन् ? डुब्नुहोला होसियार ! - Arthatantra.com
के तपाईसँग यी कम्पनीका सेयर छन् ? डुब्नुहोला होसियार !
काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत कूल २०६ वटा कम्पनीमध्ये १२ उद्योग तथा व्यावसायिक कम्पनी सम्पर्कमा रहेका छैनन् ।
उनीहरुले स्टकलाई बुझाउनुपर्ने नवीकरण शुल्कसमेत नबुझाएको पाइएको छ । वार्षिक साधारणसभासमेत नगरेका, नवीकरण शुल्क नबुझाएका र स्टकको सम्पर्कमा नरहेका ती कम्पनीलाई सम्पर्कमा आउन स्टकले पत्र पठाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले जानकारी दिनुभयो ।
सम्पर्कमा नरहेका उद्योगमध्ये अधिकांश सरकारी स्वामित्वका र निजीकरण गरिएका उद्योग छन् । विगतमा राम्रो उत्पादन गरेका र सरकारलाई समेत पर्याप्त आम्दानी गराएका उद्योग बन्द हुनु र नेप्सेमा समेत जानकारी नहुनु दुःखद् रहेको बताइन्छ । ती उद्योग तथा संस्थाले नेप्सेमा नवीकरण शुल्कसमेत बुझाएका छैनन् । नियमअनुसार न्यूनतम रु १५ हजारदेखि अधिकतम रु ५० हजारसम्म वार्षिक नवीकरण शुल्क तिर्नु पर्दछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका ती वित्तीय संस्था केही सम्पर्कमा आएका छन् । “केहीले साधारणसभाको तयारी गरेको जानकारी गराएका छन् भने केही अझै सम्पर्कमा आएका छैनन्”– नेप्सेका प्रवक्ता पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।
नेप्सेले पत्र पठाएकामध्ये विशाल बजार कम्पनी र मेघा बैंक लिमिटेडले साधारणसभा गरेको जानकारी गराएको प्रवक्ता पराजुलीले बताउनुभयो । सेन्चुरी बैंकले अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंक र सेती फाइनान्सलाई प्राप्ति गरेको जानकारी गराएको छ ।
मेघा बैंकले टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गरेको र शेयर मूल्यसमेत समायोजन गरिसकेको बताएको छ । नेप्सेमा कूल १५ समूहमा विभक्त भएका २०६ वटा कम्पनी सूचीकृत रहेको र कारोबार गरिरहेको भए पनि औशतमा १७० कम्पनीको मात्रै नियमित कारोबार भएको देखिन्छ । नेपालको पूँजीबजार रु १६ खर्बको रहेको छ । बजार विस्तारका लागि विभिन्न उपाय अपनाउने र आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । – रासस